Tăng khoái cảm, dễ lên đỉnh | Muasalebang - Muasalebang
Tăng khoái cảm, dễ lên đỉnh | Muasalebang
Đang Đọc: Tăng khoái cảm, dễ lên đỉnh | Muasalebang in Muasalebang
Amakhondomu e-Durex umkhiqizo osetshenziswa inqwaba yabantu, ikakhulukazi abantu abasha. Ngezinhlobonhlobo zezinhlobo, ama-flavour ekusetshenzisweni okuhlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo eziningi zabasebenzisi. Ngakho-ke, akunzima ukuthi uhlobo lwe-Durex lube inombolo 1 emkhakheni wamakhondomu namuhla. Ukuze uqonde imininingwane eyengeziwe mayelana nalolu hlobo kanye namakhondomu e-Durex ongawakhetha kalula futhi aphansi. Asihambe no-Chan ukuze sithole manje!
1 Imininingwane embalwa ikamela mayelana namakhondomu eDurex
2 Izinhlobo ezidume kakhulu zamakhondomu e-durex Okwamanje
2.1 1. Amakhondomu e-Kingtex Durex
2.2 2. Amakhondomu angabonakali
2.3 3. I-BCS Durex Sensation
2.4 4. BCS Durex Fetherlite Ultima
2.5 5. Durex Love
2.6 6. Durex Pleasuremax
2.7 7. Amakhondomu e-Performa Durex ahlala isikhathi eside
2.8 8. Durex Comfort usayizi omkhulu
3 Ungayisebenzisa kanjani ikhondomu ye-durex ukuze ingasheleli?
4 Ukubuyekezwa kwekhondomu ye-Durex
Imininingwane embalwa ikamela mayelana namakhondomu eDurex
Ngokuthuthuka kwe-inthanethi, isidingo socansi oluphephile nezindlela zokuvimbela inzalo sesiphuthuma kakhulu. Ikakhulukazi, ukusetshenziswa kwamakhondomu ukuvikela impilo nempilo yengqondo yabesilisa nabalingani babo kudume kakhulu. Imigqa yamanje yamakhondomu edumile isatshalaliswa yizinhlobo ezijwayelekile. Omunye wabo nguDurex – umkhiqizo wase-UK.
I-Durex ingenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zamakhondomu emhlabeni njengoba ikalwe ngabathengi eminyakeni yamuva nje. Yethulwa ngo-1915, umlando wokuthuthuka kwe-Durex usuthathe iminyaka engaphezu kwekhulu ngemigqa yomkhiqizo ehlonishwayo nesezingeni eliphezulu ezuze isikhundla esiqinile ezimakethe zasekhaya nezamazwe ngamazwe e-UK.
Ngokwemibiko yezomnotho, amakhondomu eDurex abala cishe ingxenye yesine yesabelo semakethe ezindleleni eziphephile zokuvimbela inzalo. Iningi lale mikhiqizo likhiqizwa kusetshenziswa irabha ye-latex yemvelo enezinqubo zesimanje nezithuthukile ukuze kuncishiswe ubungozi bokucasuka lapho isetshenziswa. Ukuchichima kwamamodeli, osayizi kanye nemiklamo yikho okwenza i-bcs Durex yaziwe kakhulu ngabathengi.
Izinhlobo ezidume kakhulu zamakhondomu e-durex Okwamanje
Ngesipiliyoni seminyaka eminingi emkhakheni wokukhiqiza nokusabalalisa amakhondomu, imikhiqizo evela ku-Durex ihlale ihlangabezana nezidingo nezindlela zokusetshenziswa okuvamile emhlabeni jikelele. Ngokuhambisana nalokho, ukutshalwa kwezimali okucatshangelwayo ezindleleni Zokumaketha kanye nohlelo lomkhiqizo ocebile kulethe iDurex inani elikhulu lamakhasimende. Nansi eminye yemigqa yomkhiqizo ethandwa kakhulu evela kwaDurex.
1. Amakhondomu e-Kingtex Durex
I-Kingtex ingomunye wemigqa yomkhiqizo owaziswa kakhulu ngenxa yokwakheka kwayo ehlangabezana nezidingo zabathengi abaningi. Lesi isikhwama esincane, ngakho-ke kulula ukugona “umfana” wakho, okukusiza ukuthi unqobe zonke izikhundla ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi ikhondomu iyashelela.
Amakhondomu e-Durex Kingtex ambozwe ngesendlalelo sokugcoba ukuze ukwazi ukungena kalula ekujuleni ohlangothini “lwakhe”, ungasebenzisa ngokuphelele okokugcoba okwengeziwe lapho usebenzisa ikhondomu ukuvimbela ukoma futhi umenze abubule phakathi nosuku.
Ukubuyekezwa komkhiqizo we-kingtex Durex ikhondomu usayizi omncane:
Ububanzi obungu-49mm, bufanele iningi labathengi baseVietnam.
Idizayini yesimanje, ifomu eliqinile kanye nokuba ntekenteke okuthile kuletha umuzwa wobuqiniso lapho kusetshenziswa.
Umkhiqizo ngamunye wengezwa ngejeli yokugcoba kungqimba lwangaphandle ukukusiza ngokushesha “uphakeme” othandweni futhi unciphise ingozi yokulimaza umlingani wakho.
Izinto zenjoloba yemvelo ziqinisekisa ukuphepha, zigwema ukucasuka kubantu abanezindawo ezibucayi.
Ukuthungwa komkhiqizo okuhlala isikhathi eside kukunikeza ukuthula kwengqondo okuphelele lapho uvumelana nozakwenu.
2. Amakhondomu angabonakali
I-Durex Invisible iwumugqa womkhiqizo onomklamo wesimanje onefomu lokugona umzimba eliqinisekisa umuzwa wangempela phakathi nocansi. Lona umugqa wekhondomu ozacile kakhulu we-Durex ukukusiza ube nothando lweqiniso kakhulu, injabulo engapheli eduze kwakhe. Amakhondomu angabonakali e-Durex abhekwa njengangasetshenziswanga, afaneleka kakhulu kulabo abathanda i-pristine, okwenza bobabili bahlale bedakiwe othandweni.
Lawa makhondomu anosayizi olinganiselwa ku-52mm okuyindawo evulekile ukukusiza ukugwema ubungozi bokungasebenzi kahle kwe-erectile noma i-hematoma.
Izinto zenjoloba zemvelo ezisezingeni eliphezulu zidlulisa ukushisa ngokushesha, ngakho uzozwa imfudumalo egcwele yothando. Ingasaphathwa isikhwama esingabonakali sibuye sibe nokunwebeka okuhle, ukuze ukwazi ukujabulela ngokukhululekile umuzwa lapho lezi ezimbili zihlangana ndawonye.
Idizayini encane, ekwazi ukumelana nokushelela isho ukuthi ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuthi impilo yakho yothando izophazanyiswa noma ube nenkinga yokuzama izitayela ezintsha. Nge-Invisible ungaqiniseka ukuthi ungaya ekupheleni komdlalo futhi ujabulele ngokugcwele izikhathi ezinhle kakhulu.
Abaningi benu bakhathazeka ngokuthi ukusebenzisa amakhondomu kuzoba nzima ukufinyelela phezulu, kodwa ungaqiniseka ukuthi ngaphezu kokuba mncane, amakhondomu angabonakali e-durex nawo andisa inani elikhulu lokuthambisa ukuze amsize ahlale ebushelelezi, kuzoba lula umvuthwandaba, isikhathi for foreplay kuyoba kancane nzima.
3. I-BCS Durex Sensation
I-Sensation umugqa wamakhondomu akhulisa injabulo ngezinhlayiya ezingama-500 ezintanta emzimbeni wekhondomu imibhangqwana eminingi abathanda ukuyisebenzisa. Ukuthinta nje okulula futhi intombazane yodwa yanele ukugqugquzela injabulo ngesikhathi socansi. Lokhu kuthathwa njengomkhiqizo wekhondomu ka-Durex onesipikili, okwandisa inani lejeli yokugcoba ukuze bobabili bakwazi ukushintsha kahle izikhundla eziningi ngaphandle kokoma. I-Durex Sensation inomklamo ocishe ulingane olingana nobude bomfana, ngakho abafana banganyakaza kalula futhi baqiniseke ukuthi bangasheleli lapho sebezofika phezulu.
Ukubuyekezwa komkhiqizo wekhondomu ye-Durex Sensation:
Inzwa iwumugqa womkhiqizo odumile onobubanzi obungu-52mm ofanele iningi labathengi base-Asia.
Lawa makhondomu akhiqizwa ngezinto zenjoloba zemvelo ngezinqubo zobuchwepheshe besimanje ukuze kuncishiswe ubungozi bokucasuka kumsebenzisi.
Idizayini ingeyesimanjemanje futhi ukuzaca okuphezulu kuletha umuzwa wobuqiniso kukho konke ukunyakaza.
Amakhondomu e-Durex hemp anezelwa ngamafutha okugcoba ukuze andise isikhathi socansi nokwandisa imizwa.
I-Durex Fetherlite Ultima iwumugqa womkhiqizo ozuze izinhliziyo zabathengi ngenxa yomklamo wawo omncane kakhulu. Lena ikhondomu encane kakhulu ye-Durex namuhla, izacile ngo-25% kunamakhondomu avamile. Idizayinelwe ngendlela ebushelelezi, engenameva nencane, i-Durex Fetherlite Ultima ithathwa njengekhondomu ephephe kakhulu futhi engokoqobo. Ukusebenzisa 100% izithako zekhondomu yemvelo kufanele I-Durex Fetherlite ayicasuli isikhumba somsebenzisi, uma unesikhumba esibucayi noma uya ocansini okokuqala ngqa, lo ngumkhiqizo ongcono kakhulu okufanele uwukhethe.
I-Durex Fetherlite Ultima Ukubuyekezwa komkhiqizo wekhondomu encane kakhulu:
I-Fetherlite Ultima ithenjwa inombolo enkulu yabathengi ngenxa yedizayini yayo ezacile kakhulu ezwakala ingokoqobo ngokwedlulele uma isetshenziswa. Kufana nokuzwa,
I-Ultima etherlite inobubanzi obungu-52mm kanye nempahla yerabha yemvelo ukuqinisekisa ukuphepha ngesikhathi socansi.
Yenziwe ngerabha yemvelo, kodwa ngezinqubo zokukhiqiza zesimanje, iphephile ukuyisebenzisa.
Ihlangabezana nezindinganiso zokuphepha ezizosetshenziswa ukunciphisa ingozi yokukhulelwa okungafunwa noma ukudluliselwa kwezifo ezithathelwana ngocansi.
I-Durex Love iwuchungechunge lwamakhondomu athandwa ngabesifazane abaningi ngoba yenza kube lula ukuthi abesifazane bafinyelele kuvuthondaba ebudlelwaneni ngamunye. Ngomklamo wemithambo egijima phakathi nendawo kanye nomklamo wesimanje, imibhangqwana inezinjabulo eziningi ezintsha. Ikakhulukazi, amakhondomu e-Durex Love nawo aklanyelwe ukuba abe yi-ultra-thin, equkethe i-lubricating gel, ngakho-ke uzohlala uzizwa ulula uma ungena. I-sublimation eyengeziwe kodwa ayilimazi isikhumba endaweni eseduze.
I-Durex Love ingu-52mm ngosayizi nomklamo olingana kahle ukuze usetshenziswe ngokunethezeka.
Lamakhondomu ahlala ehlanganiswa nejeli yokugcoba ukusiza ubumnandi bamadoda buhlale buqinile futhi bungenasici.
Ungakhetha kwezinambitheka eziningi ezihlukene kulo mugqa wekhondomu ukuze uzizwele lapho kuphakama isidingo.
Omunye wemigqa emisha yomkhiqizo eVietnam iDurex Pleasuremax enomklamo oyingqayizivele oletha injabulo emangazayo ngazo zombili izici zekhondomu enameva. Umklamo unama-spikes amaningi avela kuwo wonke umzimba kanye nemithambo, lokhu kubhekwa njengenhlanganisela yamandla amabili emigqa ye-Durex Love kanye ne-Durex Sensation. Ukusebenzisa le BC kuzosiza imibhangqwana ikhulise ukugqugquzela kuwo wonke amagumbi entombazane encane, imsize ukuba abubule ngenjabulo. Ikakhulukazi, isikhwama siphinde sibe nefindo elengeziwe phezulu kwesikhwama ukusiza isikhwama sihlale siqinile ngokumelene nokushelela futhi silethe umuzwa ophansi kakhulu wawo womabili amadoda.
Lolu wuhlobo lwekhondomu olukhulisa imizwa othandweni ngenxa yongqimba lwembewu nemisipha engezwe ukuze kudaleke injabulo enkulu kubo bobabili abesilisa nabalingani.
Izinto zemvelo eziphephile, umklamo wesimanje nohlakaniphile.
Umkhiqizo ungandisa kokubili umuzwa wocansi ngenkathi uqinisekisa ukuphepha kwabesifazane.
Kunosayizi owodwa kuphela ongu-56mm ububanzi, ngakho awuhlangabezani nezidingo zabathengi abaningi.
7. Amakhondomu e-Performa Durex ahlala isikhathi eside
Uma udinga isixazululo sokwandisa isikhathi socansi futhi uvimbele ukuphuma ngaphambi kwesikhathi, i-Durex Performa iyinombolo 1 oyikhethayo. Umkhiqizo wakhiwe ngokukhethekile nge-benzocaine engu-5%, isibulali-zinzwa esithambile sokwandisa ukuqhanyelwa nokwandisa isikhathi sokuqhanyelwa. Ngakho-ke ngePerforma Durex ungajabulela izikhathi ezijabulisayo nalowo muntu ngaphandle kokukhathazeka ngokungayi emakethe nokuphelelwa yimali njengangaphambili. Lokhu kubhekwa njengendlela enhle yokuthi imibhangqwana igcine umlilo ngesikhathi sothando.
Amakhondomu e-Performa Durex anomklamo omncane kakhulu, oshelelayo onikeza umuzwa ongokoqobo wokuthi imibhangqwana ikwazi ukuzithoba kalula.
Iqukethe ijeli yokugcoba ye-Beznocaine ukusiza ukuthuthukisa ukuqhanyelwa ngaphambi kwesikhathi nokwandisa isikhathi sokuqhanyelwa, isiza izithandani zijabulele noma yisiphi isikhathi esimnandi sothando kuyilapho zaneliseka ndawonye.
Ukwakheka okuzacile kakhulu okungu-52mm kuphela kusiza ukunamathela phakathi kwenduku nekhondomu kube phezulu ukuze ingasheleli ngesikhathi socansi.
I-Performa 12s iyi-latex yerabha yemvelo engu-100%, ngakho iphephile kubasebenzisi futhi ayicasuli ngokuphelele esikhumbeni.
8. Durex Comfort usayizi omkhulu
I-Comfort iwumugqa womkhiqizo olungiselelwe abathengi abanosayizi abakhulu bepipi onobubanzi obungu-56cm nobude obungu-190mm. Lona umkhiqizo okhethekile osiza labo abanosayizi omkhulu womfana ngaphandle kokuhlushwa ingcindezi ngenxa yezikhwama eziqinile kakhulu. Ukusebenzisa le khondomu enkulu ye-durex kuzokusiza ukuzethemba kakhudlwana, uthande ngokunethezeka futhi uthole i-orgasm kalula.
I-diameter enkulu yekhondomu ingu-56mm enekhono lokuletha umuzwa ovulekile futhi okhululekile ukuhlangabezana nezidingo zengxenye yabasebenzisi.
Izinto eziyinhloko ezakha umugqa womkhiqizo we-Durex Comfort kuseyi-latex yemvelo.
Lolu hlobo lwekhondomu alunawo amakha nama-flavour, ngakho alucasuli ngokuphelele uma lusetshenziswa.
Ungayisebenzisa kanjani ikhondomu ye-durex ukuze ingasheleli?
Isinyathelo 1: Dabula isikhwama ngokomugqa omakwe egobolondweni, qaphela ukugwema ukuklebhula isikhwama
Isinyathelo sesi-2: Khama kancane ifindo lekhondomu ukuze kuphume umoya uma uyigqokile. Qaphela ukuthi uhlangothi lwekhondomu lungaphandle kwenduku.
Isinyathelo sesi-3: Faka ikhondomu esihlokweni sepipi bese uphulula ikhondomu kancane ingaphandle ngesandla sakho ukuze uqiniseke ukuthi umoya ongaphakathi kukhondomu uphunyukile nokuthi akukho moya kwikhondomu nokwenza ukunamathela kwekhondomu. ikhondomu emzimbeni womthondo.
Isinyathelo 4: Gingqa bese uphulula ikhondomu ize iphume, uqinisekise ukuthi uwuvala wonke umthondo. Uma usempini, kufanele futhi ukhumbule, uma isikhwama sishibilika sibheke phansi, sibuyisele emuva ngokushesha ukuvikela isikhwama ukuthi singaphumi. Futhi uma ishelela, sicela ume kancane ukushintsha ikhondomu entsha, uqinisekise umphumela wekhondomu.
Isinyathelo sesi-5: Ngemva kokukhipha isidoda, bamba isihloko sekhondomu kancane ngesandla esisodwa bese ukhipha ipipi esithweni sangasese ngesikhathi lisamile. Bese uthatha ingxenye yomlomo bese uyikhipha kancane ikhondomu epipini
Isinyathelo 6: Uma ukhipha ikhondomu, udinga ukunaka ukugwema ukuchichima isidoda. Thikha phezulu kwesikhwama bese uphonsa kudoti.
Ukubuyekezwa kwekhondomu ye-Durex
Amakhondomu eDurex njengamanje awuphawu olusetshenziswa inqwaba yabantu abasha. Ngenxa yokuthi idumile futhi kulula ukuyi-oda, intengo ifanele izinto eziningi. Ikakhulukazi, kunezinhlobo eziningi ezinemiklamo eminingi ehlukene kusukela ku-ultra-thin, ribbed, spiked, ehlala isikhathi eside, ukuze ukwazi ukuthola kalula umkhiqizo olungile we-bcs.
Kodwa-ke, ngenxa yokuthi iyathandeka kakhulu, kukhona nabakhiqizi abaningi bomgunyathi kanye nokulingiswa kwalolu hlobo lokuthengisa. Abaningi benu cishe bazofunda ukubuyekezwa kwamakhondomu e-durex angalungile, anokukhwabanisa, amabi ….Kodwa ukuze uphile futhi uthuthuke njalo njenganamuhla, iyunithi yebhizinisi esheshayo ngeke ikwazi.okungaba. Ngakho-ke, ukuze uhlole ukuthi amakhondomu e-durex mahle yini, kufanele ukhethe ngokuhlakanipha ukuwathenga ezitolo zangempela ezinedumela elihle bese uzama ukuzizwa. Ngizoshiyela wonke umuntu lokhu kubuyekezwa ngemuva kokuthi wonke umuntu ezwe :))
Ngenhla ulwazi oluyisisekelo mayelana nemigqa yekhondomu edumile evela kumkhiqizo we-Durex. Ngezinzuzo zezinto zokwakha, ukuklama kanye nobuchwepheshe, kuqinisekile ukuthi amakhondomu e-Durex azobusa kancane kancane emakethe futhi abe umhlinzeki wekhondomu wesibili ngobukhulu emhlabeni esikhathini esizayo esiseduze.
5 cách tách hạt óc chó nhanh chóng, đơn giản ai cũng làm được | Muasalebang
[Review] Bột cần tây Green Beauty có tốt không? Chi tiết | Muasalebang